Saadaasha Doorashooyinka Soomaaliya ee 2016
Publicerat 2016-09-26 23:54:00 i Allmänt
Waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan shiikh in waqtigiisu dhamaad ku dhow yahay maxaa yeelay mar labaad masoo noqon doono. Sida aan ka baranay siyaasadda Soomaaliya ma jiro, nin xilkii uu hayay labo mar labaad loo doortay marka laga reebo Ra'iisul wasaare Cumar abdirashiid oo labo mar xilka ra'iisul wasaare loo magacaabay iyo madaxweyne Maxamed siyaad oo tiisu aheyd hal xisbi iyo nin dooran doorta.
Shiikh shariif oo soo noqday hogaamiyihii maxkamadaha iyo madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka aheyd ayaa maanta ku dhowaaqay inuu yahay murashax xilka madaxweynenimo asagoo dalkana dib ugu soo noqday ka dib mudo 4 sano ah oo uu ku maqnaa dalka dibadiisa oo uu waxbarasho u joogay. Shiikh Shariif dhamaan siyaasiyiinta ayuu u yahay tusaale fiican maadama uu ka gaabsaday dhaleeceynta iyo wax ka sheegitaanka madaxda hogaamisa dowladda federalka ah, sidoo kale kama uusan hadlin siyaasadda dalka iyo mida caalamka midna mudadii uu xilka ka degey ka dib balse hada ayuu isuu soo sharaxay xilka ugu sareeyo Soomaaliya sidoo kale shiikhu wuxuu wataa taageerayaasha ugu badan ee uu leeyahay nin murashax ah, siyaasiyiintii xilalka kasoo qabatay xukuumadihii kala duwanaa ee dalka ee aan ka dhex muuqan xukuumada hada iyo kuwa xukuumada ka mid ah ayaa u muujiyay taageero weyn waxayna u balan qaadeen in ay u ololeyn doonaan shiikha sidii uu talada dalka ugu soo noqon lahaa shiikhuna wuxuu xafladii maanta ka sheegay inta uu siyaasada ka fadhiyay inuu diyaariyay qorshe howleedka uu dalka ku hogaamin lahaa qaladaadkiisii horena uu wax badan ka bartay. Shiikh Shariif wuxuu ku jiraa shaqsiyada ugu cadcad doorashadaan asaga iyo Farmaajo oo horay u soo wada shaqeeyay balse ku kala irdhoobay siyaasadda. Anigu waxaan ku jiraa taageera yaasha shiikha kuwooda ugu horeeya waxaana u rajaynaa guul iyo inuu noqdo madaxwaynaha xigga ee dalku yeesho.
Qore: Mahdi Abdiweli
Xasuustii Etoopiyaankii Xamar soo galay!
Publicerat 2016-08-22 07:39:00 i Allmänt
Waxay aheyd goor galab ah sannadkii 2007 waxaan u imid saaxiibkayga oo harqaan ku lahaa Ex Kontorol, Huriwaa.
Wax yar markii aan la joogay oo aanan weli kala hadal boganin, ayaan waxaan maqalnay qarax weyn oo ka dhacay laamiga horteena ah, in yar ka dibna waxaa bilaabatay rasaas xoog leh oo meel walba loo ridayo, aniga iyo saaxiibkayga iyo waxaa isla joognay wiil yar oo xooga yara buurna, waxaan ku fekernay hadii aan banaanka u baxno in ciidamadu na dili doonaan maadaame dhaqankoodu sidaas ahaa hadii aan guriga joognana inay noo imaan doonaan oo na xiri doonaan ugu yaraan, waxaan ku fikirnay xalkale oo ahaa inaan isku qarino safiitada iyo jiingada dhexdooda oo aan kor fuulno, balse waxaan dhibaato kala kulanay in aan qaadiwaynay wiilkii kale hadii aan meesha uga tagnana waxaan ka baqaneynay inay Etoobiyaanku wataan ama dilaan, ugu danbeyn waxaan ku niri guriga gal oo cida isku dex ali anagana waan dhuumanaynaaye meeshii ayaana fuulnay. Ciidamadii soo galay xaafada meel walba way baarayeen guri guri ilaahayna waa naga qariyay maalinkaas waxay dileen dad kor u dhaafayo 13 qof oo aan waxba u gaysanin ayaga sidoo kale waxay dhaawaceen in ka badan 20 ruux ayagoo uga aar gudanayo qaraxii lala eegtahay. Nimankii qaraxa soo abaabulay maxay ka faa'ideen qaraxaas hadiiba dad kale oo soomaaliyeed ayaga dartooda loo laayay. Maalinkaas dadka dhintay waxay u badnaayeen fuundiyaal iyo dhalinyaro internet isaga jirtay oo inta gudaha loogu galay mid mid loo toogtay. Ninkii ciidan hogaaminayay asagoo Sargaal sare ah oo weliba dadku qiimeeyaan ayuu Soomaaliya tuulo iyo degmo walba maraa weliba asagoon u dhalan Soomaaliya (waa Gabre). Dadkaygu ilowsho dhawaa oo dowladaydu la'aa marba hadii ay soo dhawaysatay dilaagii waynaa ee dadka badan laayay.
Ujeedada aan qoraalkaan u qoray waxaa weeye inaan dadka xasuusiyo qeyb ka mid ah xasuuqii Etoobiyaanka ka geystay dalkayga. Waa xasuus aan marqaati ka ahaa oo aan usoo joogay oo weliba igu reebtay xanuun badan maxaa yeelay aabahayga sxbkiis ayaa ku jiray dadka la dilay.
Ku soo dhawow bloggayga
Publicerat 2016-08-12 23:54:00 i Allmänt
Bartaan waxaan u samaystay inaan kusoo bandhigo qoraaladda aan qoro iyo sawiradda, si dadkuna uga faa'idaystaan anigana ay iigu noqoto xasuus iyo keyd.
Waxaa ka mamnuuc ah in qoraal aan aniga qoray dartiisa qof kale loo aflagadeeyo sidoo kale ma ogoli sawir aan aniga soo qaadatay in la qaato oo si qalad ah loo isticmaalo.
Qoraaladda aan soo bandhigi doono waxay u badnaan doonaan kuwa ku saabsan soomaalida iyo Soomaaliyaba, Marka aan qoraaladda ka qorayo Soomaaliya oo dhan waa isugu kay mid maxaa yeelay weli waxaan aaminsahay Soomaaliweyn, waxaa laga yaaba dadka qaarkiis inay igu dhibsadaan waxa aan qorayo balse waxaan leeyahay waa fikirkayga iyo waxa aan aaminsanahay ee ha iiga xumaan aniguba kaaga kuguma nicinee.
Mahad Abdiweli, Warsame
Waxaan ahay soomaali ku nool Vasteras Sweden. Waxaan xiiseeya siyaasadda,arimaha bulshada iyo sportiga.